मित्रताको मोल, संगत गुनाको फल ! – Sodhpatra
हाम्रो जीवन वा भविष्य कस्तो हुने हो ?
प्रकाशित : १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार २१:३० July 30, 2021
हाम्रो जीवन वा भविष्य कस्तो हुने हो ? यसको निर्धारण हाम्रो साथी संगतले पनि गर्छ । तपाईं कस्तो साथीको संगतमा हुनुहुन्छ, जीवनमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । असल साथीको संगतमा हुनुहुन्छ भने उनीहरु तपाईंको निम्ति सुख र सफलताको स्रोत हुन् । तपाईं उन्नतीमा, तपाईंको उमंगमा उनीहरुले साथ दिन्छन् । तर, खराब साथीको संगतमा परियो भने जीवन नर्क हुनसक्छ । र, तपाईंसँग नितान्त त्यो स्वतन्त्रता छ कस्तो साथीको संगत गर्ने ?
जीवन जिउने क्रमसँगै हामी समाजमा घुलमिल हुन्छौं, पढ्न थाल्छौं, काम गर्न थाल्छौं, पेशा–व्यवसाय अपनाउँछौं । यी सबै कुरामा हामीलाई कसै न कसैको साथ–सहयोग चाहिन्छ । कसैको हौसला चाहिन्छ । कसैको ढाडस चाहिन्छ । कसैको आड चाहिन्छ । र, हामीलाई आफ्नो जीवन सहज बनाउन जोडिने यी सबै पात्रहरु हाम्रा मित्र हुन् । अभिन्न मित्र । साथी । संगी ।
अहिले भौतिक विज्ञानमा पनि साथीको महत्वलाई प्राथमिकता दिइने गरिएको छ । हामी आ–आफ्नै काम धन्दा, पेशा व्यवसाय, परिवार आदिको चक्करमा लागेर साथी संगत छुटाउँदै गएका छौं । हाम्रा साथी–संगत पातलिएको छ । यस्तो अवस्था छ कि, कुनै दिन उन्मुक्त खुसी साट्न परेमा हामीसँग साथीहरु हुँदैनन् । कुनै विपतमा सर–सहयोग खोज्नुप¥यो भने हामीसँग साथीहरु हुँदैनन् । यसरी एक्लिदै गएको हामीमा तनाव, एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता मानसिक समस्या थपिदै गएको छ । पछिल्लो समय डिप्रेसनबाट मुक्त हुनका लागि पनि साथीको सर्कल बनाउनुपर्छ भन्न थालिएको छ ।
हामी आर्थिक कुरा पनि साथीसँग शेयर गर्छौं । घरायसी कुराहरु शेयर गर्छौं । दम्पतीबीचको सम्बन्ध, खटपटबारे पनि खुलेर साथीसँग कुरा गर्छौं । यस किसिमको प्रवृत्तिले भने भोलिको दिनमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । किनभने आज जो हामीसँग घनिष्ठ मित्र बनेका छन्, भोलि उनीहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध टुट्न सक्छ । त्यसैले सबै कुरा साथीलाई शेयर गर्नु हुँदैन । -अनलाइनखबरबाट